Waa maxay Medicaid oo muxuu daboolaa Context link | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Waa maxay Medicaid oo muxuu daboolaa Context link
Taariikhda Ugu Dambaysay ee La Cusbooneysiiyay: Context link Abriil 05, 2021
Medicaid waa barnaamij ay leeyihiin dawladda dhexe iyo gobolka oo siiya caymiska daryeelka caafimaadka dadka u-qalma. Gobol kasta wuxuu leeyahay barnaamijka Medicaid oo u gaar ah, balse dawladda dhexe waxay leedahay xeerar ay tahay in dhammaan gobolladu raacaan. Dawladda dhexe waxay sidoo kale bixisaa ugu yaraan kala bar maalgelinta si loo buuxiyo shuruudahooda Medicaid.
Iyadoo lagu salaynayo qawaaniinta dawladda dhexe, gobolladu waxay abuuraan oo maamulaan barnaamijkooda Medicaid si ay sida ugu wanaagsan ugu adeegaan deggeneyaasha u-qalma. Dawlad-goboleedyadu waxay dooran karaan inay bixiyaan adeegyo ka badan inta dawladda dhexe u baahan tahay inay bixiso waxayna sidoo kale dooran karaan inay caymis siiyaan kooxo badan oo dad ah.Medicaid waxay siisaa caymiska daryeelka caafimaadka dadka u-qalma, iyadoo lagu salaynayo dakhliga iyo qiimaha hantidooda.
Guudmar degdeg ah oo ku saabsan Medicaid ka daawo fiidiyowyada aasaasiga ah ee uu Sameeyay Medicaid ee Waadaxa ah. Context link
Medicaid waxaa loo bilaabay ka qayb ahaan Xeerka Sugnaanta Bulshada ee 1965. Sharciga asalka ah wuxuu dhigayaa ikhtiyaarka helitaanka maalgelinta dawladda dhexe si gacan looga geysto siinta caymiska daryeelka caafimaadka ee carruurta qoysaskooda dakhligoodu hooseeyo, qaraabadooda daryeelahooda, dadka indhoolayaasha ah iyo dadka naafada ah. Muddo kadib, dawladda dhexe waxay xoojisay sharciga iyo shuruudaha barnaamijyada Medicaid ee gobolka.
Gobol kasta wuxuu go'aamiyaa macaashyada kala duwan ee uu ku bixiyo Medicaid.
Yuu u adeeggaa Medicaid?
Barnaamijyada Medicaid waxay u adeegaan kooxo gaar ah oo dad ah, oo ay ku jiraan:
Goboladu waxay sidoo kale dooran karaan inay u balaariyaan u-qalmitaanka kooxaha kale, sida dadka dakhligoodu hooseeyo ee laga yaabo inay leeyihiin ama aysan lahayn carruur.
Waa maxay CHIP?
CHIP, oo u taagan Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta, waxay siisaa caymis qiimo jaban carruurta aan qoysaskoodu buuxinin shuruudaha u-qalmitaanka dakhliga ee Medicaid. CHIP waxaa sidoo kale laga yaabaa inay siiyaan caymis haweenka uurka leh ee jooga gobolada qaarkood, balse ma daboosho dadka waaweyn ee daryeelaya carruurta u-qalma CHIP.
Medicaid marka loo eego tiro ahaan
76.4 milyan shaqsiyaad ah ayaa ka diiwaangashan Medicaid iyo CHIP
69.7 milyan shaqsiyaad ah ayaa ka diiwaangashan Medicaid
6.6 milyan shaqsiyaad ah ayaa ka diiwaangashan Chip
Xigasho: Medicaid.gov Ogosto 2020 Warbixinta Diiwaangelinta
Waa maxay adeegyada daryeelka ay bixiyaan Medicaid?
Gobol kasta wuxuu go'aamiyaa macaashyada kala duwan ee uu ku bixiyo Medicaid. Sharciga dawladda dhexe ayaa uga baahan gobolada inay bixiyaan macaashyo gaar ah, kuwaasoo loo yaqaano macaashyada khasabka ah. Goboladu waxay sidoo kale dooran karaan inay bixiyaan macaashyada iyo adeegyada kale ee hoos yimaada Medicaid. Kuwaani waxaa loo yaqaanaa macaashyada ikhtiyaariga ah. Jaantuska hoose wuxuu muujinayaa kuwa ay yihiin macaashyada khasabka ah iyo kuwa ay yihiin macaashyada ikhtiyaariga ah ee Medicaid.
Macaashyada Medicaid ee khasabka ah
Macaashyada Medicaid ee ikhtiyaariga ah
Adeegyada isbitaalka ee bukaan-jiifka
Daawooyinka dhakhtarku qoro
Adeegyada isbitaalka ee bukaan-socodka
Adeegyada rugaha caafimaadka
Baaritaanka hore iyo kaltanka ah, adeegyada ogaanshaha iyo daaweynta cudurka (EPSDT)
Adeegyada xarunta kalkaalinta
Daaweynta shaqada (fikirka iyo dhaqdhaqaaqa)
Adeegyada caafimaadka guriga
Adeegyada khalkhalgelinta cilladaha hadalka, maqalka iyo luqadda
Adeegyada daryeelka neefsashada (neefsasho).
Adeegyada rugta caafimaadka ee miyiga
Adeegyada kale ee ogaanshaha cudurka, baarista, kahortagga iyo baxnaaninta
Adeegyada xarunta caafimaadka ee dawladda dhexe ansixisay
Adeegyada daryeelka cagaha (daryeelka cagta)
Adeegyada shaybaarka iyo Raajada
Adeegyada indhaha (aragga).
Adeegyada qorsheynta qoyska
Adeegyada umulisada kalkaalisada ah
Ilkaha macmalka ah
Adeegyada kalkaalisada sharciyaysan ee caafimaadka ee carruurta iyo qoyska
Beddelida macmalka ah ee xubnaha jirka (beddelida xubnaha go'an ama dhaawacan ee jirka)
Adeegyada xarunta dhalashada ee gaarka ah (haddii ay sharciyaysan tahay ama sida kale gobolku aqoonsan yahay)
Gaadiid-raaca lagu aado daryeelka caafimaadka
La-talinta joojinta tubaakada ee haweenka uurka leh
Adeegyada kale ee dhaqtarka
Adeegyada kalkaalinta ee daryeelada kala duwan
Daryeelka gaarka ah
Daryeelka gebagebada nolosha
Adeegyada loogu talagalay shakhsiyaadka da'doodu tahay 65 jir ama ka weyn ee lagu helo gudaha mac'hadka cudurrada maskaxda (IMD)
Adeegyada xarunta dhexe daryeelka ee Shakhsiyaadka qaba naafonimada garaadka
Adeegyada kaalmada gaarka ah ee is-hagista
Doorashada ikhtiyaarka koowaad ee bulshada
Adeegyada la xiriira Qaaxada
Adeegyada dhimirka ee bukaan-jiifka ee shakhsiyaadka da'doodu ka yar tahay 21 jir
Adeegyada kale ee uu ansixiyay Xoghayaha Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha
Guryaha caafimaadka leh ee loogu talagalay dadka isdiiwaangeliyay ee qaba xaaladaha daba-dheeraaday
*Tani waxaa ku jira adeegyada lagu bixiyo mac'hadka aan ggobta caafimaad ahayn ee diimeed, adeegyada gurmadka ee isbitaalka ee ay bixiyaan Isbitaalka ay sharciyeeyeen Medicare, iyo caymiska daawada dhakhtarku qoro ee Medicaid ee isbitaalka helitaanka daryeelka muhiimka ah (CAH).
Caymiska daawada dhakhtarku qoro waa macaash ikhtiyaari ah sida ku cad sharciga Medicaid ee dawladda dhexe. Balse, laga bilaabo 2020, gobolada oo dhan waxay soo biirin doonaan nooc ka mid ah caymiska daawada dhakhtarku qoro sida ku cad barnaamijkooda Medicaid. Guud ahaan, inta badan dadka ku jira barnaamijka Medicaid ee gobolka ayaa heli doona caymiska daawooyinka dhakhtarku qoro.
Daryeelka caafimaadka guriga ee Medicaid iyo caymiska daryeelka waayeelka ee hoyga la deggan yahay
Barnaamijyada Medicaid waxaa sidoo kale laga yaabaa inay daboolaan adeegyada Guriga iyo Bulsheed (HCBS) ee kala duwan si looga caawiyo dadka inay ku sii noolaadaan guriga oo ay ka firfircoonaadaan bulshada dhexdeeda. Heerka taageerada la bixiyo ayaa caadi ahaan ku salaysan baahiyaha qofka.
Tusaalooyinka noocyada daryeelka caafimaadka guriga iyo adeegyada daryeelka sare ee hoyga la deggan yahay ee qaybta ka ah barnaamijyada HBCS waxaa ka mid ah:
Daryeelka gaarka ah sida qubeyska
Daryeelka kalkaalisada xirfadda leh
Daawaynta shaqada, hadalka iyo jimicsiga
Maareynta cuntada iyo nafaqada (cuntada caafimaadka leh)
Cuntooyinka guriga lagu keeno
Hawlaha guriga iyo ilaalinta guriga
Qaar ka mid ah adeegyada HCBS sida daryeelka kalkaalinta xirfadlaha iyo daawaynta shaqada, jirka ama hadalka waxaa bixiya xirfadlayaal u-qalma iyo, mararka qaarkoodna, xirfadlayaal sharciyaysan. Adeegyada kale, sida qabashada hawlaha guriga iyo karinta cuntada, waxaa samayn kara xubnaha qoyska, saaxiibada ama daryeelayaasha lacagta la siiyo.
Sida loo codsado Medicaid
Maadaama gobol kasta uu maamulo barnaamijkiisa Medicaid, u-qalmitaanka wuu kala duwan yahay gobol ka gobol kale. Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan u-qalmitaanka, la xiriir hay'adda Medicaid ee gobolkaaga. Ama, ka codso onlaynka mareegta hay'adda Medicaid ee gobolkaaga si aad u ogaato inaad u-qalanto.
Waa maxay Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNP)?
Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah(ama qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah ee loo qalmi karo) waa nooc ka mid ah qorshaha caymiska caafimaadka ee loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba. Dadkaan waa kuwo “u-qalmo labada caymis” waayo waxay u-qalmaan macaashyada Medicaid iyo sidoo kale macaashyada Medicare.
Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah waxay siiyaan caawimaad dheeraad ah dadka u baahan. Taasi waxaa sabab u ah dakhliga, naafonimada, da'da iyo/ama xaaladaha caafimaadka. Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah ayaa la shaqeeya qorshaha caafimaadkaaga ee Medicaid. Waad haysan doontaa dhammaan macaashyadaada Medicaid. Inta badan qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah waxay sidoo kale ku siinayaan macaashyo iyo sifooyin ka badan kuwa aad ka hesho Original Medicare. Dhammaan lacagta ugu hooseysa ee dhan $0 ee carbuunta qorshaha. Ogow wax badan oo ku saabsan macaashyada caymiska caafimaadka ee laba geesoodka ah.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 03.22.2022 waqtiga 11:22 SUBAXNIMO CDT